Isitayela Baroque yokudweba, umehluko oyinhloko
Ukuze ahlobise emagcekeni abalandeli kweqiniso futhi Ongoti bonke ubudala baye basebenzisa imidwebo. Uma ekhethwe kahle futhi, babonise ngokugcwele ukunambitheka enkulu yomnikazi endlini, bezibona ayekufezile nasekuqondeni ubuhle ezicashile. Masterfully zaveza imidwebo - indlela ephumelela kakhulu ihlobise ikhaya.
Ngokwemvelo kuphakama umbuzo ngokuqondene nokuthi imiphi isitayela Umdwebo efaneleka kakhulu yokwenza umhlobiso ingaphakathi? Ochwepheshe bathi option ezifanele kakhulu kungaba isitayela yezobuciko. Ngo imidwebo, yaziwa ngokuthi ethandwa iningi izitayela linqoba eYurophu cishe emakhulwini amabili eminyaka (kusukela ngasekupheleni kwekhulu le-16 kuya maphakathi 18). Lapho kwazalelwa khona Baroque - Italy libalele.
Ngokuthakazelisayo kakhulu igama isitayela - baraque, okuyinto has a umsuka isiPutukezi. Yilokho-Portuguese ngokuthi izipho oyigugu kolwandle - amapharele, eyayintula i ijamo okungajwayelekile - okungukuthi, kube yinqaba. Baroque Umdwebo ekuqaleni esiqokiwe ezinye bakloloda, futhi igama lakhe lihlotshaniswa igama elithi "bezitolo". Kodwa akusho ukuthi lokhu babe isithiyo nokukhula ngokushesha kwayo yonke iYurophu.
I baraque kuhlukile mdwebo?
Phakathi izici eziyinhloko isitayela kukhona solemnity yayo ngenxa yobukhulu, ikhono lokubonisa nezinjabulo zokuphila, futhi ukuphelela kwalo. Libhekene ngokupenda Baroque futhi imiva yayo, nika umehluko, ukucabanga okungavamile. Baroque libhekene play evelele yokukhanya nasethunzini, umbala kanye umthunzi.
Yini enye engingabuye ezahlukene le enhle, imidwebo egqamile? Abaculi, abalobi isitayela Baroque, wafuna ukudala imisebenzi omkhulukazi. Indalo agcwele dynamism kanye nengcebo edwetshwe indawo muhle kakhulu, ngisho Ongoti azinikele yobuciko.
art Baroque ngokuvamile izihloko basezinganekwaneni noma zenkolo. Kodwa ngokuvamile ungathola eni of the Izicukuthwane, amahle ngendlela emangalisayo futhi aluhlaza.
Ahlonishwe njengoba omunye wabasunguli be-Baroque isitayela imidwebo, edumile umdwebi Italian Caravaggio ayethanda ukudala imidwebo ukuthi kukhona uhlamvu ebalulekile, egcwele ezolile elibuhlungu futhi ijulile. Kodwa abalandeli bakhe benza ntandokazi ngokudalwa kwemisebenzi ngokucace nakakhulu, egcwele umbala nokukhanya. Ngokuhamba kwesikhathi, njengoba kuyofikwa distancing ezinye kusukela izindikimba zenkolo.
Ayikho ngaphansi abaculi abadumile - Rembrandt umDashi futhi Rubens ohlala Flanders - bawungenisa isitayela Baroque yokudweba touch of imibala yamazwe abafanele. Bakwazi ukudala imisebenzi kwathuthukisa isiko kanye namasiko abantu babo.
Ukutadisha imisebenzi abaculi ngubani ukubhala isitayela Baroque, kungase futhi kuyabonakala ukuthi isitayela ukuthuthukiswa bathonya ngokwenkolo. Okuningi abaqhoshayo uhlamvu futhi wamemezela isitayela onesizotha esingokwemvelo kubaculi kusuka emazweni Catholic (Italy naseSpain). Umsebenzi abasekeli neSonto lamaProthestani kukhona imizwa esivaliwe ngaphezulu, ngesizotha nangokuhluzeka okukhulu.
Makovsky Konstantin Egorovich: Biography, umsebenzi
Indlela ukudweba kwelanga phezu kolwandle? Ukusebenza okuningiliziwe
Udweba kanjani isikhala: ukudalwa iphuzu umkhathi ipensela
Toulouse Lautrec: isithombe kanye Biography emfushane
Uhlobo Trendy zobuciko: Umdwebo elifanayo ezintweni eziphilayo, izinkondlo kanye izithombe
Indlela gxuma intambo - amathiphu wabaqalayo
Ultrasound Umhlinzi - lokhu kuyindlela ephephile futhi ephumelela kunazo survey
Kanjani ukuze uthole dvuhvostok balahle endlini yangasese
Ukwakhiwa Of Cottages Vs umshini wokuwasha ukulungisa
"Giovanni" izingubo. izingubo zikanokusho ngezikhathi ezikhethekile
"Urolesan": analogue, isenzo, Izimo